Wadahadalo lagu siideynayo Southafrican lagu haysto Soomaaliya oo Socda – SBC
Wadahadalo lagu siideynayo Southafrican lagu haysto Soomaaliya oo Socda
Hayad Soomaaliya u joogta Samatabixinta Dadka abaaraha haystaan oo la yiraahdo GIFT of the Givers ayaa bilowday wadahadalo lala galayo Burcad badeed Soomaali kuwaasi oo sannad ka hor qafaashay laba muwaadin oo u dhashay Wadanka Southafrica.
Masuulka ugu sareeya Hayada oo la yiraahdo Imtiaz Sooliman,ayaa waxaa uu sheegay in ay socdaan meel ficana marayaa wadahadalo ay la wadaan kooxda haysta labada Muwaadin ee south African oo lagu kala magacaabo Bruno Pelizzari and Debbie Calitz.
Masuulkan ayaa xusay in lahaystayaasha ay xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan islamarkaasina ay wadaan wadahadalo loo siimarayo Alshabaab oo ku aadan sii deynta inkasta oo uusan masuulkan sheegin inay alshabaab u qafaalan yihiiin iyo inkale.
Kooxaha Burcada ah ee ay afduubka u haysta labadan muwaadin ayaa dalbaday lacag Madaxfurash oo gaareysa $4 million oo dollar wallow ay walaac ka muujiyeen ehelada dadkan ay ka soo jeedaan.
Burcad badeeda Soomaalioya ayaa waxaa ay xeebaha Soomaaliya weli ka wadaan afduubyo isdaba jog ah oo lagu bartilmaameedsanayo Gadiidka caalamka u kala gooshaya.